Nandritra ny taona maro dia fanaoko ny nanoratra momba ny marika. Vondron'olona malemy paika miady hevitra momba ny loko maitso amin'ny sary famantarana no toa tsy nahomby tamiko. Toy ny vidin'ny masoivohon'ny marika izay nandoa vola an'aliny na an-jato mihitsy aza. Ny momba ahy dia momba ny injeniera. Ny kaody loko tokiko izay tiako fotsiny dia ny mampifandray zavatra iray. Ny asako dia ny famahana ny olana izay simba ary avy eo manamboatra azy.